Nezvedu - Wenling Huwei Fan Factory
Inowanikwa muTaizhou guta, dunhu reZhejiang, Wenling Huwei Fan Fekitori ine tsvimbo dzinopfuura mazana maviri dzave kutarisa nezveindasitiri yemhepo. Huwei inopa zvigadzirwa zvekugadzira nekuwedzera kushanda nemhepo nyowani yekuchengetedza mota, zvakatipoteredza-zvine hushamwari zvinhu uye zvakagadziriswa mweya flue dhizaini. Isu tinopa vatengi vane yakakwira-inoshanda, kuchengetedza simba, zvigadzirwa zvakachengeteka uye zvakavimbika pasirese.
Kubva kuR & D, chakuvhuvhu chiri kusimukira, panorova jekiseni, jekiseni, gadzira mota kugadzirwa kwechigadzirwa, isu tinoongorora kudzora kwemhando nhanho imwe neimwe, kuti tirambe takanakira zvakanakira mhando, mutengo, inoshanda uye nzvimbo yebasa, iyo inowedzera zvakanyanya simba redu rakazara uye njodzi yekudzivirira kugona.
Zvigadzirwa zvikuru- mhute mafeni, maindasitiri mafeni, vateveri vemhepo, axial-kuyerera mafeni, gasi hita uye hita yemagetsi wawana CE, ROHS, PSE, SAA, CCC certification. Uye zvigadzirwa zvese zvinotumirwa kuMiddle East, Europe, Australia, Southeast Asia, Japan uye nezvimwe .. Sevateveri vanozvipira vehunhu hwakanakisa, kuburikidza nehunyanzvi hwekubatanidza kwecheni yeindasitiri, tinosanganisa maitiro ekutsvaga kukwana munzvimbo dzese dze chigadzirwa chedu.
Seyenyika yehunyanzvi hunyanzvi hwekuita bhizinesi, Huwei anoomerera pachinangwa chedu chekuvandudza mamiriro ehupenyu hwevanhu, kugarisana pamwe nemasikirwo, kugadzirisa zvigadzirwa zvirinani uye sevhisi, kupa yega yega nzvimbo yakachena, yakanaka uye ine hutano yekugara.